Tantara: Niﬁdy An’i Davida Andriamanitra - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Io no Davida zatovo. Nonina tao amin’ny tanànan’i Betlehema izy. Ny raibeny dia i Obeda, zanakalahin-dRota sy Boaza. Tsaroanao ve ireo olona ireo? Ary ny rain’i Davida dia i Jese. Nikarakara ny ondrin-drainy i Davida. I Davida dia teraka folo taona taorian’ny niﬁdianan’i Jehovah an’i Saoly ho mpanjaka.
Dia tonga ny fotoana nilazan’i Jehovah tamin’i Samoela hoe: ‘Makà diloilo manokana ary mandehana any amin’ny tranon’i Jese any Betlehema. Efa niﬁdy ny iray amin’ireo zanany lahy ho mpanjaka aho.’ Rehefa hitan’i Samoela ny lahimatoan’i Jese atao hoe i Eliaba, dia niteny anakampo izy hoe: ‘Ity marina no ilay noﬁdin’i Jehovah.’ Nefa hoy i Jehovah taminy: ‘Aza mijery ny halavany na ny tarehiny. Fa tsy niﬁdy azy ho mpanjaka aho.’
Ary niantso an’i Abinadaba zanany lahy i Jese ka nitondra azy teo amin’i Samoela. Nefa hoy i Samoela: ‘Tsia, tsy ity koa no noﬁdin’i Jehovah.’ Manaraka, dia nentin’i Jese i Sama zanany lahy. ‘Tsia, tsy niﬁdy an’ity koa i Jehovah’, hoy i Samoela. Nentin’i Jese teo amin’i Samoela ny ﬁto tamin’ireo zanany lahy, nefa tsy niﬁdy na iza na iza tamin’ireny i Jehovah. ‘Izay avokoa va ny zazalahy rehetra?’, hoy ny fanontanian’i Samoela.
Inona no nitranga rehefa nentin’i Jese teo anatrehan’i Samoela ny zanany ﬁto lahy?